काठमाडौं,बैशाख १४ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा दुर्जकुमार राईलाई नै बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कायममुकायम महानिरीक्षक राई अब महानिरिक्षक हुनुहुने छ । सशस्त्र प्रहरीका प्...
Posted on May 02, 2016 | views: 270
दोधारा चाँदनीको गौरी शंकर सामुदायिक बनमा आगो लाग्यो
पप्पु गुरुङ्, १४ बैशाख, दोधारा चाँदनी /कञ्चनपुर । गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक बन दोधारा चाँदनीमा आगो लागेको छ् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित रहेको गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक बनमा अचानक...
काठमाडौं,बैशाख १४ । कुनै वेला साइकल चढेर मन्त्रालय ओहोर–दोहोर गरेर चर्चामा आएका जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान केही समययता हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला भ्रमणमा निस्कन थालेका छन् । पछिल्लो एक...
Posted on May 02, 2016 | views: 144
काठमाडौं,बैशाख १४ । टुटफुटबाट गुज्रेका माओवादीहरुबीच एकीकरणको प्रयास घनिभूत भएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी र एमाओवादीबीच वैशाख १५ गते निर्णायक वार्ता हुने एमाओवादी स्रोतले बताएको छ । वार्ताले सकारात्मक...
कञ्चनपुरका जिशिअ माथि कालोमुसो दल्ने प्रयास
पप्पु गुरुङ्, १३ वैशाख / दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्यामसिंह धामी माथि कालोमुसो दल्ने प्रयास भएको छ । संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति संग छलफलका क्रममा कालोमुसो दल्ने ...
Posted on May 03, 2016 | views: 625
ठगी आरोपमा पक्राउ परेका नयाँ शक्तिका नेता पार्टीबाट निलम्बित (विज्ञप्ती सहित)
काठमाडौं,बैशाख १३ । नयाँ शक्ति नेपालले ठगी आरोपमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका केन्द्रीय परिषद सदस्य अशोककुमार थापा पार्टीबाट निलम्बित गरेको छ । नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले आज एक विज्ञप्ती जारी...
काठमाडौं,बैशाख १३ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका ११ जिल्लाका ३८३ गाविसमा अनुदान पाउनयोग्य घरधनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनुदान पाउनयोग्य ...
Posted on May 03, 2016 | views: 505
दीक्षित पक्राउ परेपछि एमाओवादीमा ठूलो हल्लीखल्ली,महरा झनै आत्तिए
काठमाडौं,बैशाख १३ । कनकमणि दीक्षित पक्राउ परेपछि एमाओवादीमा निकै ठूलो हल्लीखल्ली भएको खबर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दीक्षितसँगै बयानमा बोलाइएका एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई कुनै पनि ...
भट्टराई स्थान कसले सम्हाल्न भन्नेमा रायमाझी र कार्कीबीच भिडन्त
काठमाडौं,बैशाख १३ । एमाओवादीबाट बाहिरिएर नयाँ शक्तिको सिर्जनामा लागेको बाबुराम भट्टराईको विरासत कसले धान्ने भन्नेमा एमाओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी र राम कार्कीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पद र...
काठमाडौं,बैशाख १३ । कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर दिल्लीमा छन् । उनी दिल्ली पुग्नासाथ नेपाली राजनीतिमा अज्ञात आशंकाहरु बढ्दो छ । एक जना नेता दिल्ली जानु खासै ठूलो कु...
लट्री धन्दाका नाइके बाबुरामको नयाँ शक्तिको नेता
१३ बैशाख, काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय पार्षद् सदस्य ओखलढुंगा दियालेका अशोककुमार थापा अन्तर्राष्ट्रिय ‘लट्री’ धन्दामा लागेको पाइएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ...
राष्ट्रपति भण्डारी बारपाकीसँग एक बचन नबोली फर्कीइन्
१३ बैशाख, बारपाक गोरखा । राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले बारपाकीलाई आइतबार सम्बोधन गरिनन्। राष्ट्रपतिले केही पनि नबोलेपछि बारपाकी आक्रोशित भएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। सान्त्वनासहितको...
भूकम्पले भत्किएको धरहरा एक वर्षमा कस्तो भयो ?
१३ बैशाख, काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पबाट देशभर जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको छ । राजधानी काठमाडौंको मुटुमा अवस्थित ऐतिहासिक नौ तले धरहरा फेदैसम्म ढलेर ध्वस्त भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। धरहरा भत्किदा ध...
बालकृष्णलाई पक्रन बाटो खुल्यो, पक्रेला त पुलीसले
१२ बैशाख, काठमाडौं । ओखलढुंगा, पोकली–२ लेतीका उज्जन श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ। नगरिक दैनिकमा समाचार छ। सर्वोच्चले ...
मरिसकेकाको नाममा पनि भत्ता
१२ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो भुत्तानी दिएर, नक्कली औंठा छाप लाएर र लगतकट्टा नगरी हिनामिना गरेको पाइएको छ। कारोबार दैनिकमा समाचार छ। महालेखा परीक्षकको कार्...
Posted on May 01, 2016 | views: 298
शोकले सन्नाटा छाएको ठाउँमा सरकार भूकम्प ‘उत्सव’ मनाउँदै
१२ बैशाख, बारपाक गोरखा । गाउँमा गहुँ–जौ भित्र्याउने चटारो छ, बारपाकबासीलाई मकै र आलु गोड्न हतारो छ। वर्षा लाग्न थालिसक्यो, बलियो टहरो बनाउनुछ, फुर्सद छैन। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। भूकम्पको वार...
Posted on May 03, 2016 | views: 257
१२ बैशाख, काठमाडौं । गत १२ वैशाखको भूकम्पले घर भत्काएपछि टहरामा पुगेका चाँगुनारायण– ३ का सन्तोष थापाले वर्ष दिन त्यहीँ गुजारे। साउनको मुसलधारे पानी र पुसको कठ्यांग्रिँदो ठन्डी खेपेको उनको परिवार अहिल...
कनकमणी दीक्षित आईसीयूमा, रिहा गर्न पश्चिमा देशको दबाब
१२ वैशाख, काठमाडौं । करोडौं रुपैयाँ अवैध रुपमा धन थुपारेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेका कनकमणी दिक्षितलाई छाट्न पश्चिमा देशले दवाव दिएका छन् । नेपालमा पश्चिमा देशको एजे...
Posted on May 02, 2016 | views: 215
अब प्रधानमनत्रीससँग सिधा कुरा गर्न पाइने
१२ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनबाट शनिबारदेखि सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम प्रसारण हुने भएको छ । जनताले टेलिफोन तथा विभिन्न सञ्चारका माध्यमको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना समस्या, ...
कैलालीमा आगलागी, नियन्त्रणमा आउन सकेन
११ बैशाख, कैलाली । कैलालीको चुरे क्षेत्रमा सातादेखि लागेको डढेलो नियन्त्रणका आउन नसक्दा कराडौ बराबरको प्राकृतिक सम्पदा जलेर नष्ट भएका छन् । चुरे क्षेत्रमा बैशाषको पहिलो सातादेखि लागेको डढेलो फैलिद...
स्थानीय निर्वाचनका लागि तमतयार रहनु ः उप-प्रधानमन्त्री रावल
११ बैशाख, बाजुरा । उप—प्रधान एवं रक्षामन्त्री भिम रावलले यथासक्य छिटो स्थानीय निकायाको निर्वाचन हने बताउनु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री रावलले बाजुरा क्याम्पस छात्रवासको उद्घाटन गर्नुहुंदै सरकारले छिट...
काठमाडौं,बैशाख ११ । ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफलभई निरंकुश राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएको आज एक दशक पुरा भएको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक...
संविधानबारे मधेसमा प्रचारीत भ्रम चिर्ने जिम्मा सुरक्षाकर्मीलाई
११ बैशाख, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने काम गर्न सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती र भ्रम दुवैलाई चिर...
संविधान कार्यान्वयन सुस्त
११ बैशाख, काठमाडौं । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सरकार सुस्त देखिएको छ । संविधान जारी भएको सात महिनामा सरकारले कानुन निर्माणका सवालमा देखाउनु पर्ने तदारुकता देखाउन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन पक्...
Posted on May 02, 2016 | views: 227
११ बैशाख, काठमाडौं । अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार हुने संख्या करिब डेढ लाख छ । अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार हुनेहरूको संख्या एक लाख ३४ हजार आठ सय ३९ रहेको सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देश...